शब्दकोश: February 2013
जीवन ‌= Life
केही समययता कोठा सरेको छु सहरको बीच भागबाट किनारातिर । गोठाटार गाविसमा पर्ने काँडाघारीमा गाउँकै बसाइ जस्तो आनन्द चाखिरहेको छु । गुम्म सहरबाट खुला फाँट भएको गाउँ उक्ले जस्तो । तर, यो गाउँ पनि नगरोन्मुख छ । दिनानुदिन थपिंदै गरेका घरको संख्या हेर्दा यो ठाउँको नाम काँडाघारीबाट अब ‘घरबारी’ राख्‍नुपर्ला जस्तो देखिन्छ । पहिले स्याल दगुर्ने अनि काउली र सा ग फल्ने बारीभरि घरैघर ठडिएका छन् । नयाँ घर नथपिएको अवस्थामा पनि बनिसकेको घरमाथि तला थप्ने उत्कण्ठासहित छडको सिङ र जुरो पलाएका हुन्छन् (वरिपरिका अकाशिएका घरहरुले चुनौती पनि त बेस्मारी दिन्छन् !) । र पनि काठमाडौं सहरको अगाडि गाउँ नै हो यो । अफिस रहेको तीनकुने कटेर नयाँ वानेश्वरतिर लाग्दा हाटबजार भर्न सहर पसे जस्तो भान हुन्छ । आजकाल हत्तपत्त ‘सहर’ पस्न छाडेको छु । साथीभाइसँगको सम्बन्ध नवीकरण गर्ने तलतलले मात्रै बेलाबेला तान्ने हो । प्रायः गाउँमै मन भरिन्छ ।
Posted by Jotare Dhaiba at Monday, February 25, 20137: Comments
कान्छा कविको जेठा कविता
साहित्यको बजार विस्तार हुँदै जाँदा पछिल्लो समय बजारको उपभोग्य वस्तुसरह बन्न थालेको छ साहित्य । बजारको निर्देशन र फर्माइशअनुसारको लेखन र पाठक नामको उपभोक्तालाई लट्ठयाउने गरी आकर्षण छर्ने अहिलेको होड त्यसैको उदाहरण हो । यही क्रममा हाम्रो साहित्यले बजार हल्लाको रूप पनि लिएको छ । तर, अधिकांश आधारबिनाका यी होहल्लादेखि पर शान्त र उपेक्षित कुनोमा फुट्ने गर्छ साहित्यको खास बीज । त्यस्तै बीज लिएर यसपटक देखिने भएर आएका छन् अनुज पुस्ताका कवि छम गुरुङ । २४ वर्षे ठिटोको कविता किताब 'पोर्टर बा' का कविताहरू पढ्दा समकालीन कवितालेखनमा उनको हस्तक्षेप एक कदम अघि बढेर कुम मिलाउने खालको देखिन्छ । 'पोर्टर कविताहरू'को भारीले धेरैलाई किच्न सक्छ । यस हिसाबले कान्छो पुस्ताको कविको जेठोजाग्दो कविताहरू लाग्छन्, छमका कविता ।
Posted by Jotare Dhaiba at Sunday, February 17, 20130: Comments
गुनासो र आरोपको जोर मुठी उचाल्ने ए हजुर,
छक्कै पो पर्छु तिम्रो मुठी खानुपरेर
मैले प्रेमको नाममा
एक अक्षर कोरिनँ ?
कुनै प्रेम कविता लेखिनँ ?
Posted by Jotare Dhaiba at Friday, February 08, 20133: Comments